Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny fitaovana Chrome / Chromium amin'ny Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny fitaovana Chrome / Chromium amin'ny Ubuntu 18.04
Ho an'ny mpampiasa Ubuntu maro, ny hetsika eo alohan'ny solosain'izy ireo dia voafetra amin'ny navigateur web ihany, ny browser na Google Chrome na Chromium. Fahita ihany koa ny mahita na mampiasa YouTube hijerena horonantsary na hiasa amin'ny maha YouTuber anao. Ho an'ireo asa ireo, Raha tsy manana CPU mahery ianao, na dia hafahafa aza, dia mety hiteraka CPU tsy ho voalanjalanja ilay CPU ary mandany angovo, loharano bebe kokoa ary miteraka hafanana bebe kokoa.
Manantena aho fa hamboarina io ny kinova Chromium manaraka dia noho ny fampandehanana ny fanafainganana ny fitaovana fitetezana tranonkala noho ny fampiasana ny VA-Driver-API izay hampiditra ny kinova Chromium ho avy sy ny kinova fananana, Google Chrome. Efa afaka manana izany ao amin'ny Ubuntu izahay, fa noho izany mila manana ny kinova fampandrosoana an'i Chromium isika.
Ny fametrahana ity kinova Chromium ity dia tsy maintsy ataontsika amin'ny alàlan'ny tahiry ivelany. Mba hanaovana izany dia manoratra izao manaraka izao amin'ny terminal izahay:
Vantany vao apetrakao ity kinova ity avy eo tsy maintsy mametraka ny mpamily mifanentana amin'ny GPU izahay hampiasain'ny tranokala finday, karazana famenony. Mampalahelo fa miasa ho an'ny AMD sy Intel GPU ihany izy, Ny NVidia dia mitohy manana olana amin'ireo mpamily azy ary tsy manana plug-in ho an'ny carte grapik'izy ireo izy ireo. Raha manana Intel GPU isika, dia tsy maintsy soratantsika ao amin'ny terminal ireto manaraka ireto:
Raha manana karatra sary misy AMD GPU isika, dia tsy maintsy soratantsika ao amin'ny terminal ireto manaraka ireto:
Saingy misy zavatra iray mbola tsy hita: Lazao amin'i Chromium hampiasa fanafainganana fitaovana. Ho an'ity dia tsy maintsy ampidirintsika ity adiresy ity chrome: // flags / # mampandeha-haingana-horonan-tsary ao amin'ny bara adiresy ary alefaso ny fanafainganana ny fitaovana. Raha vantany vao nahavita an'io izahay, dia averinay indray ny Chromium ary hanananay ny fanafainganana ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fitehirizana loharano sy ny fiasa tsara kokoa amin'ny tranokala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny fitaovana Chrome / Chromium amin'ny Ubuntu 18.04
Ches Lo dia hoy izy:
Mety ho an'ny Mate 16.04 ve izany? Misaotra.
Valiny amin'i Ches Lo
Ahoana ny fametrahana Mailspring amin'ny Ubuntu sy ny tsiro ofisialy
Ahoana ny fanovana ny terminal Ubuntu 18.04